Ny fanadihadihana manokana dia manentana ny mpandray anjara; izay afaka miova, ary tsy maintsy miova izany.
Hatramin'izao, efa nolazaiko anao momba ireo fomba fanao vaovao nangatahan'ireo fanadinadinan'ny mpampiasa azy. Na dia izany aza, iray amin'ny tohin'ny fanadihadiana nataon'ny mpanara-maso ny solosaina dia tsy misy mpanadihady olombelona hanampy amin'ny fitazonana sy fandraisana anjara amin'ny fandraisana anjara. Olana iray izany satria maro ny fanadihadiana dia samy mandany fotoana sy manelingelina. Noho izany, amin'ny ho avy, ireo mpikaroka mpanadihady dia tsy maintsy mamolavola ny mpandray anjara ary manao ny fomba famaliana ireo fanontaniana ho mahafinaritra sy lalao toy izany. Io dingana io indraindray antsoina hoe gamification.
Mba hampisehoana ny mety ho fijerin'ny fanadihadiana mahafinaritra, andeha hodinihintsika ny Friendsense, fanadihadiana iray natao ho toy ny lalao ao amin'ny Facebook. Sharad Goel, Winter Mason, ary Duncan Watts (2010) Te maminavina tena ny olona no mihevitra izy ireo toy ny namana sy ny tena izy ireo raha ny marina toy ny namany. Ity fanontaniana mikasika ny fitoviana amin'ny toe-tsaina tena izy sy tsapany dia tonga mivantana amin'ny fahafahan'ny olona hahafantatra tsara ny tontolo iainany ara-tsosialy ary misy fiantraikany amin'ny fanenjehana ara-politika sy ny fiovan'ny fiovan'ny fiaraha-monina. Ny fomba fihevitra, ny tena fitoviana amin'ny toe-tsaina sy ny fihetseham-po dia zavatra mora handrefesana. Ny mpikaroka dia afaka manontany olona maro momba ny hevitr'izy ireo ary manontany ny namany mikasika ny hevitr'izy ireo (izany dia mamela ny fanamarinana ny fifanarahana amin'ny tena izy), ary afaka manontany olona maro izy ireo haminavina ny toetran'ny namany (izany dia mamela ny fanombanana ny fifanarahana ). Mampalahelo fa sarotra loatra ny manadihady ny olona iray sy ny namany. Noho izany dia nodinihan'i Goel sy ny mpiara-miasa aminy ny fanadihadiana ho fampiasa Facebook izay nahafinaritra ny nilalao.
Taorian'ny naneken'ny mpandray anjara iray tamin'ny fandalinana fikarohana, ny app dia nisafidy namana avy amin'ny kaonty Facebook-n'ny mpanadihady ary nametraka fanontaniana momba ny fihetsiky ny namana (sary 3.11). Nifanakalozan'ny fanontaniana momba ny namana voafidy voafidy, namaly ihany koa ny fanontaniany momba ny tenany. Rehefa namaly valiny momba ny namana iray ilay mpanadihady dia nilazany raha marina ny valinteniny na, raha tsy namaly ilay namany, dia afaka namporisika ilay namany haka ny fandraisana anjara ilay namaly. Noho izany, ny fanadihadiana dia niely an-tsokosoko tamin'ny alàlan'ny fananganana virtoaly.
Figure 3.11: Fanaraha-maso avy amin'ny fianarana Friendsense (Goel, Mason, and Watts 2010) . Ireo mpikaroka dia nitodika tamin'ny fanandramana mikasika ny toe-tsaina amin'ny fomba mahazatra ho toy ny traikefa mahafinaritra sy lalao. Ny app dia nanontany ireo mpandray anjara tamin'ireo fanontaniana matotra sy fanontaniana maivana kokoa, toy ilay naseho tamin'ity sary ity. Ny tarehin'ny namana dia navotsotra. Natonta tamin'ny alalana avy amin'i Sharad Goel.
Ny fanontaniana momba ny toe-tsaina dia nifanaraka tamin'ny fanadihadiana ankapobeny. Ohatra hoe: "Miombom-pihetseham-po amin'ny Isiraeliana mihoatra noho ny Palestiniana any amin'ny faritra Afovoany Atsinanana ve ny [namanao]?" Sy "Hahazo haba ambony kokoa noho ny an'ny fanjakana ve ny [namanao] hanome fitsaboana iraisampirenena?" Ankoatra ireo fanontaniana lehibe ireo , ireo mpikaroka dia nifangaro tamin'ny fanontaniana mafonja kokoa hoe: "Aleo misotro divay noho ny labiera [ny namanao]?" ary "Moa ve ny [namanao] hahazo hery hamaky ny saina, fa tsy ny hery hidina?" manara-penitra kokoa ny mpandray anjara ary nahavita nampitaha fampitahana mahaliana ihany koa: mety hitovy hevitra amin'ny politika matotra ve ny toe-draharaha sy ny fanontaniana mahasadaikatra momba ny fisotroana sy ny heriny lehibe?
Nisy vokany telo lehibe avy tamin'ilay fianarana. Voalohany indrindra, ny namanao dia nanome valinteny mitovy amin'ny vahiny, fa na dia ny namana akaiky aza dia mbola tsy nanaiky ny 30% amin'ny fanontaniana. Faharoa, nanamafy ny fifanekeny tamin'ireo namany ireo namaly. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia tsy voamarikao ny ankamaroan'ny hevitry ny fisainana misy eo amin'ny namana. Farany, ny mpandray anjara dia mety hahatsapa ny tsy fitovian-kevitra amin'ny namany amin'ny raharaha politika lehibe toy ny olana mahazatra momba ny fisotroana sy ny hery ambony.
Na dia indrisy tsy azo atao aza ny fampiharana azy, dia ohatra tsara dia tsara amin'ny hoe ahoana no ahafahan'ny mpikaroka manova fanadihadiana momba ny toetr'andro ho mahafinaritra. Amin'ny ankapobeny, miaraka amin'ny famoronana asa sy ny famoronana asa, azo atao ny manatsara ny traikefan'ny mpandray anjara amin'ny mpandray anjara amin'ny fanadihadiana. Noho izany, rehefa manomana fanadihadiana ianao, dia makà fotoana kely hieritreretana ny zavatra azonao atao mba hahatonga ny traikefa tsaratsara kokoa ho an'ireo mpandray anjara anao. Ny sasany mety hatahotra fa mety hitera-pahavoazana ny kalitaon-tsoratra ireo dingana ireo, saingy heveriko fa ireo mpilatsaka an-tsokosoko dia mampidi-doza lavitra kokoa ho an'ny kalitao.
Ny asan'ny Goel sy ny mpiara-miasa dia mampiseho ny lohahevitry ny fizarana manaraka: mampifandray ny fanadihadiana amin'ny loharanom-baovao lehibe. Amin'ity tranga ity, amin'ny fampidirana ny fanadihadiana miaraka amin'ny Facebook, ireo mpikaroka dia afaka miditra amin'ny lisitry ny naman'ireo mpandray anjara. Ao amin'ny fizarana manaraka dia handinika ny fifandraisana misy eo amin'ny fanadihadiana sy ny loharanom-baovao lehibe amin'ny antsipiriany bebe kokoa.